Imikhankaso ye-PixelHELPER Yobuntu Namalungelo Abantu
Imikhankaso Yobuntu Namalungelo Abantu
Amaphrojekthi lapho i-PixelHELPER isebenza khona ukuvula isithakazelo somphakathi kwizihloko ezilahlwe kahle. Ukugxila kwabezindaba kuyadingeka lapha ukuze kutholakale ukukhulumisana okuvamile kanye ne-intanethi, ukuhanjiswa kwegciwane lolo lwazi. Noma yikuphi ukwabelana kwemikhankaso yokuxhumana nabantu kuyasiza futhi kukhuthazwa. Khuluma kumbuthano wethu wabangani mayelana nemikhankaso yethu bese uzama ukusisekela.
Okuthunyelwe okunamathelayoOn 9. Apreli 2020
Okuthunyelwe okunamathelayoOn 19. January 2020
Okuthunyelwe okunamathelayoOn 17. January 2020
Okuthunyelwe okunamathelayoOn 18. January 2019
Okuthunyelwe okunamathelayoOn 17. January 2019
Okuthunyelwe okunamathelayoOn 19. Februwari 2018
Okuthunyelwe okunamathelayoOn 27. May 2016
Okuthunyelwe okunamathelayoOn 20. Apreli 2014
Imikhankaso Yobuntu Namalungelo Abantu Juni 15th, i-2020Oliver Bienkowski